Miisaaniyad sare oo dhameystiran $ 200 iyo beddelaad?
Dib u eegista alaabta Audio
Sony-SS-CS5 wuxuu iga dhigayaa maalmo hore sida suxufi sax ah, marka $ 300 / Lab ay ugu yaraan tahay inaad filan karto inaad ku qarashgarato afhayeenka kaladuwan. Hadda waxaad ku sii wadi kartaa si ka wanaagsan sidii aad u yartahay, kula hadlayaasha sida Pioneer ee hadda-legendary SP-BS22-LR $ 129 / laba qof oo caddaynaya inay suurtagal tahay in ay samayso cod wanaagsan oo raqiis ah.
Soo-galayaasha SONY-ka ee qaybtaan waa kuwo qaali ah, laakiin weli waa kuwo macquul ah; Waxaan jeclaa minaaradda SS-CS3 ee shirkadda markii aan dib u eegay Dib u eegida Masraxa Guriga. Just on sariirta, waxaan waydiiyay Sony inay i soo dirto $ 219 / double SS-CS5 dhibcaha.
Qodobka ka dambeeya kuwa cusub ee ku hadla luqada cusubi waa in ay dheelitiradooda 3/4-inch ay si fiican ugu dhejiyaan codka sare ee codka. Marka laga eego aragtida farsamada ah, taasi waa mid run ah, sababtoo ah faylalka caadiga ah ee maqalka sare ee 24-bit / 96 kilohertz waxay leeyihiin jawaab celin kulul ilaa 48 kHz, kaliya xishoodka tweeters 'ayaa ku qiimeeyay 50 kHz.
Haddii ama maqalka dhawaaqa sare ee waligaa uu gaari doono wax muhiima weli waa su'aal aad u furan , laakiin haddii aad geli lahayd, waxay macno u leedahay in ay raadiso tweeters jawaab celin dheer.
Si fiican u hadal farsamooyinka casriga ah, aynu ogaano sida arrimahan ay u dhawaaqayaan.
Sony SS-CS5: Noocyada iyo Noocyada
• 0.75-inch (19mm) oo ah dhar-dheecaan dhejisan
• 1-inji (25mm) dhejis dhar-xire ah
• 5.25-inch (130mm) oo loo yaqaan 'mica woofer'
• Faafaahinta kabaha shan-cidda ku hadasha
• Qiyaaso: 13.1 x 7 x 8.6 ee / 178 x 335 x 220 mm
• Miisaanka: 9.4 lb / 4.5 kg
Waa maxay wax aan caadi ahayn oo ku saabsan kaniisadani waa ciriiri-culus, dabcan, laakiin sidoo kale miyiga miro woofer-kiciyo. Anigu ma xasuusan karo waxyaalahan soo socda ee maadada woofer ka hor (marka laga reebo SS-CS3), laakiin waa mid aad u iftiiminaya oo adagaya - sida konfoofka woofer waa inuu noqdaa.
Inkasta oo rucubyada ay ku xiran yihiin iskuullada da'da weyn leh halkii ay ka buuxsan lahaayeen magnets, hadalku waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican oo leh daboolka, sidaas daraadeed waa habka aan u isticmaalo.
Setup wuxuu ahaa mid yar oo cake ah. Waxaan ku dhuftay afafka dusha sare ee aan ku hadlo qadada madow ee loo yaqaan 'Target metal', waxayna ku dhejiyaan kuwa isku midka ah ee aan ku dhejiyo qadiyadayda Fever F206. Waxay u muuqdaan xaq aad u wanaagsan. Waxaan isku dayey in aan dib ugu soo celiyo derbiga iyaga ka dambeeya si ay u arkaan haddii ay ka faa'iideysan karaan xoogaa baas sare ah, laakiin waxaan si fiican u jeclaa sheekada ku hadasha afkooda.
Waxaan isticmaalay qalabkeyga Krell S-300i kaas oo awood u leh SS-CS5. Xanuun, waan ogahay, laakiin waxaan jeclahay inaan sii joogo isla imtixaanka isku mid ah intii suurtagal ah. Ilaha waxay ahaayeen Sony PHA-2 USB amp / DAC iyo Pro-Ject iyo Bandhigyada Musikada ee ku xiran NAD PP-3 pre-phono.
Sony SS-CS5: Waxqabadka
Imtixaanadayda dhegaysiga, SS-CS5 waxay si deg deg ah u muujisay xooggeeda iyo daciifnimada. Awoodda dhabta ah waa codka dhalashada. Hoos-u-dhaca - SPOILER ALERT !!! - waa in 5.25-woofer uusan soo saarin bass badan.
Tusaale weyn: "Kaua'I O Mano", oo ka soo jeeda Rev. Dennis Kamakahi's Pua'ena CD. Kamakahi wuxuu lahaa mid ka mid ah codadka ugu qiimaha badnaa ee aan weligay maqal (ka hubi halkan), laakiin dad badan oo ku hadla ayaa ka dhigaya mid dhawaaqaya. Ma aha SS-CS5. Waxaan maqleysey inaanan wax murqan ah ku dhicin codkiisa ama gumaadka hoose ee guntinta muhiimka ah. Waxaan sidoo kale maqlay warka wanaagsan ee treble faahfaahin aan xitaa macquul ah edginess. Hooska yar ee wooferka ah ma uusan soo gudbin awoodda hoosta hoose ee la jabiyay (oo ah furaha suufka guud ahaan lagu dhuftay D iyo G oo ka yimid E iyo A, oo ah qoraalka ugu hooseeya ee 73 Hz), laakiin SS-CS5 ayaa si aad ah u buuxsamay $ 1,100 / labo B & W CM1 S2, oo aan dib u eegay Dib u Eegista Masraxa Guriga (oo dhawaan soo socda).
Si aan u hubiyo in hodanka iyo sinnaanta aan maqlo aan ahayn qashinka, waxaan ku riday "Subaxdii Good School School," oo ka yimid Muddy Waters ' Folk Singer , oo laga soo qaaday 24/96 PCM oo ka yimid HDTracks. Muddo tobanaan sano ah, duubintaan waxaa lagu soo bandhigay qayb weyn oo loogu talagalay tayada aan la aqoonsan iyo faahfaahinta codka Waters. SS-CS5 markale ayay mar kale ku garaacday, iyaga oo bixiya Waters oo aan laheyn shimbir, aan laysku halleyn karin, looma baahna wadaagid, mana jirto taxadar muuqda. Suntu waxay ahayd mid buuxda oo igu filan wax kasta oo aan rabay in aan maqlo buugan.
OK, waxa ku saabsan maqal la'aanta ah? Mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan haysto waa Chesky Records ' The Coryells, oo lagu diiwaangeliyay guitars aqriska ah kaniisad aad u qurux badan oo ku taala Westhampton West Side. Codka guud wuxuu ahaa mid wanaagsan, mar labaad SS-CS5 waxay bixiyeen cod buuxa oo ka badan B & W CM1 S2, laakiin halkan waxaan ku ogaanay waxa aad ka maqan tahay adiga oo kharashka $ 200 / kharashka ku baxaya u hadlaaya kuwaaga. CM1 S2 waxay faahfaahin dheeraad ah oo dheeraad ah ka heshay, waxayna abuurtay xarun ballaaran oo ballaaran oo SS-CS5 aan xitaa la socon karin. Sidoo kale, tiradii SS-CS5 ayaa si siman u muuqata; Waxaan sheegi karaa in ay leedahay waxoogaa sarreeya oo ka mid ah jawaabta kor ku xusan 4kHz.
Waxaan qiyaasayaa in $ 200 / laba qof oo ku hadlaayo loo isticmaali doono pop iyo dhagax, sidaas darteed waxaan u baahday inaan arko haddii SS-CS5 uu lahaa laadkii loo baahnaa ee lagu xalin lahaa hawshaas. Jawaabta: ma aha run ahaantii. Markii aan ku ciyaaray "Highway Star" oo ka yimid Deep Purple's Made in Japan - taas oo ah mid aad u yar oo canshuur ah oo ka baxsan dameerka, dhirta dameeraha, (ama ka sii fiican, madaxa madaxeyga). Anigu sidoo kale ma helin dareen badan oo ah dabeecadda dabiiciga ah ee wanaagsan . Made in Japan waa wax ka mid ah duubista "purist" oo aan lahayn wax qarxin ah iyo dib-u-dhajin yar-yar, laakiin SS-CS5 ma si dhab ah iigu siiyay sixirkaas. (BTW, YouTube waxay leedahay hal sawir oo cajiib ah oo ku saabsan samaynta Made in Japan waa waajib ah taageerayaasha biraha, jooji waxaad sameyneyso oo daawaneyso hadda.)
Sidee loo barbar dhigaa Pioneer SP-BS22-LR? Anigu ma ihi horay u haystay Pioners si aan isbarbardhigo, laakiin waxaan haystaa xusuusta dhageysiga iyo cabirrada. Asaasiga ah, SS-CS5 waxay leeyihiin cod buuxa, oo laga yaabo in ay yaraato mid dhexdhexaad ah, laakiin seddexdeeda ayaa ah mid aad u jilicsan sidaa daraadeed waxaan rajeynayaa inaysan ku haboonayn codka iyo faahfaahinta muuqaalka SP-BS22-LR.
Haddii aad rabto cod buuxa oo leh bass badan, hel subwoofer ama inaad ku darto miisaanka SS-CS3. Haddii aad rabto wakhti aad u faahfaahsan, codka raaxada leh, waxaad heleysaa wax-qabad badan oo ku-ool ah sida Hoolka Music Marimba.
Sony SS-CS5: Cabbiraadyada
Jaantuska aad kor ku aragtaa wuxuu muujinayaa jawaabta joogtada ah ee SS-CS5 ee xariiqda (buluug buluug) iyo celceliska jawaabaha at 0 °, ± 10 °, ± 20 ° iyo ± 30 ° horizontal (raad cagaaran). Guud ahaan, khadka tooska ah iyo kabriidka intaa ka badan, kuwan si fiican ayuu u dhawaaqayaa.
Jawaabta jawaabta SS-CS5 waxay u egtahay mid sahlan, gaar ahaan $ 219 / laba qofood. On-axis, waa +/- 3.4 dB laga bilaabo 70 Hz ilaa 20 kHz, taas oo ah natiijo aad u wanaagsan oo ku hadla af-soomaaliga. Waxaa jira xoogaa kor u kaca 1.1kHz, kaas oo laga yaabo in codadku ay si fiican u taagaan. Plus waxaa jira hoos u jajaban ee dheelitirka tonan, taas oo micnaheedu yahay in qofka hadlaya uusan u badneyn in uu iftiin ama iftiin ama dhuubo. Jawaabta celceliska / off-axis waa mid aad ugu dhow jawaabta soo-saarka, taas oo wanaagsan.
Isku celcelinta celceliska 8 ohms iyo dibedda ugu hooseeya 4.7 ohms / -28 °, sidaa daraadeed dhibaato ma jirto. Qiyaasaha xasaasiyadda Anechoic 86.7 dB ee 1 watt / 1 mitir, haddaba sawir qiyaastii 90 dB gudaha qolka. Qofka hadlaya waa inuu si fiican u shaqeeyaa iyada oo la adeegsanayo amp oo dhan 10 watts ama ka badan kan kasta.
Waxaan cabiray SS-CS5 iyada oo la socdo baaritaanka Clio 10 FW iyo MIC-01 microfoon, meel fogaan ah 1 mitir oo istaagay 2 mitir. cabbirka ka hooseeya 200 Hz ayaa la qaaday iyada oo la adeegsanayo farsamada diyaaradeed ee dhulka 1 mitir.
Sony SS-CS5: Ujeedka Finalka
SS-CS5 waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee aan ku hadlayo ee aan maqalay $ 400. Waxay ku tartami kartaa qaar badan oo ka mid ah $ 400 / labo dhibcood oo aan ku maqlo, inkastoo intooda badani haystaan ​​6.5-wfter iyo 10 ama 20 Hz oo dheeraad ah. Haddii aad rabto in $ 200 / laba qof midab-kala-soocid ah loogu talagalay dadka caanka ah, jazz, dad ama qowmiyadeed, kama fikiri karo doorasho fiican.
Anthony Gallo Acoustics Nidaamka Heerka Sare - Sawir Sawireed
Nidaamka Nidaamka Nidaamka Isku-xirka Tizen ee Samsung
Pioneer SP-SB23W Nidaamka Bar-Barayaasha - Sawir Sawireed
Ultimate Ears UE Roll 2 Speaker Bluetooth
Nidaamka Korontada ee IOGear ee "Multiroom Audio"
Libratone ONE Guji iyo TOO Gacaliyeyaasha Meesha la Qaadan karo
Dib-u-Dhisidda Musikada V90-DAC Dib-u-eegista Isku-duubka Digital-to-Analog
Peachtree Audio Deepblue2 Dib-u-eegida Maqalka Bluetooth
Bowers & Wilkins 685 Dib-u-eegida Hadalka Sheeko-celinta
Sidee loo maamulaa kooxo kala duwan
Waa maxay iPad Air?
Microsoft Word ma taageeri CMYK Sawirro?
Waa maxay Tarbiyadii Linux iyo Sidee Ay u Isticmaali Kartaa
Liistada Shabakadaha Bulshada ee Xayawaanka Caruurta
Farqiga u dhaxeeya Xisaabaadka Maxaliga iyo Microsoft ee Windows
Sidee loo soo dhejiyaa Boostada Oldernet-ka
10ka Miisaaniyadeed ee ugu Fiican MP3-yada si loogu iibsado 2018
Baro Command Linux - at
Maxay Foomka OXT?
Go'aami Nabadgelyada Nidaamka Isticmaalida Waqti Xakuumada
Sidee loo tirtiraa codka on iPhone
Maxay Tilmaameedka ZIP?
Sida loo Xaqiijiyo Xayeysiinta Xbox One
Waa maxay Khadka Lacag La'aanta ah ee Shabakada?
Toban Waalid Waalidku Wakhti Xaad U Sameen Karo Inaad Ilaali Barta Internetka
Sida loo abuuro Database ah Excel
Raadi Sababta Maxay Gmail u Qaybisay Farriin Muhiim ah
Ka-saarista Dheeraadka dheeraadka ah ee Dukumiintiyada
Siyaabaha lagu yareeyo iPhone Email Kaydinta
Sida Loo Helo Heshiiska Wanaagsan ee loo Isticmaalayo Tilmaamaha iPod